07:42:13 am 24-May-2022
बिटक्वाईन वा क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा जानकारी
नेपालमा बिटक्वाईन वा क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धित मुद्रा हो । अबैध रुपमा गरिएका कारोबारीहरुलाई सिबिआईले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले यसको कारोबार प्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भईरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले बिदेशमा बस्ने र नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने ब्यक्तिहरुले समेत बिटक्वाईनको कारोबार गरेको आसंका गरि नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने दर कम भएको समेत अनुमान लगाएको छ । अर्को तर्फ रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण पश्चात अमेरीका र युरोपीयन युनियनले गरेको प्रतिबन्ध पश्चात रुसले रुबल वा बिटक्वाईनमा भुक्तानी स्विकार गर्ने घोषणा गरेपश्चात यस प्रति बिश्वको दृष्टिकोणमा परिबर्तन आईरहेको सन्दर्भ साथै भारतले चालु बर्षको बजेट मार्फत यसलाई ३०% आयकर लाग्ने घोषणा गरेको छ । नेपालले पनि यसलाई भविष्यमा कुनै तरिकाले पक्कै पनि नियमन गर्ला बिश्वबजारमा यसको उपस्थिति देखाउला यसको लागि बिटक्वाईनको बारेमा जानकारी पाउनु सबै नेपालीहरुको अधिकारको बिषय भएकाले अहिले यसको बारेमा चर्चा गर्न लागिएको हो ।
क्रिप्टोकरेन्सी वा बिटक्वाईन के हो ?
यो एक प्रकारको अमुर्त(भर्चुअल) मुद्रा हो । अमुर्तको अर्थ अन्य मुद्रा जस्तै यसको भौतिक स्वरुप छैन अर्थात छुन, देख्न वा अनुभव गर्न सकिँदैन ।यो एक किसिमको डिजिटल करेन्सी हो । बिटक्वाईन, ईथिरियम, रिप्पल, लाईटक्वाईन आदि केही प्रमुख क्रिप्टो करेन्सी हुन् ।
बिटक्वाईन बिश्वको पहिलो र सबैभन्दा चर्चित क्रिप्टोकरेन्सी मानिन्छ । कसैसँग बिटक्वाईन छ भने यसको उपयोग गरेर सामानहरु किन्न सकिन्छ (प्रतिबन्ध भएका देशहरुमा बाहेक) । यसलाई अनलाईनबाट मात्र खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ ।
यो आफैमा स्वचालित तरिकाले नियमन हुने हुनाले यसलाई बिकेन्द्रित मुद्रा पनि भनिन्छ ।यसलाई राख्ने कुनै बैंक छैन। ब्यक्तिले आफ्नो डिजिटल वालेटमा राखेको क्वाईन नै उसको सम्पत्ति हो । यदि ब्यक्तिले आफ्नो वालेटको पासवर्ड बिर्सियो अथवा कुनै तरिकाले रिकभर गर्न सकेन भने यसको कुनै उपचार छैन । कसैले कुनै तरिकाले यो चोरी गर्‍यो भने यसको उजुरी गर्ने स्थान छैन ।
बिटक्वाईनको बिकास सातोशी नकामोतो नाम गरेको अभियंता (ईन्जिनियर) ले सन २००८ मा गरेका थिए । सातोशी उनको असली नाम होईन । सन् २००९ मा ओपन सोर्स सफ्टवेयरको रुपमा यसलाई जारी गरिएको थियो । यसको शुरुवात ३ जनवरी २००९ मा भएको थियो । यो पहिलो बिकेन्द्रित डिजिटल मुद्रा हो । कम्युटर नेटवर्किङ्गमा आधारित भुक्तानी गर्न यसको निर्माण गरिएको हो ।
बिटक्वाईनको मुल्य दिनप्रतिदिन परिबर्तन भइरहन्छ । आज यसको मुल्य ४०,१०९ डलर अर्थात रु ४२,११,४४५।-छ । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा ५.२५% र एक हप्ताको तुलनामा १४.०९% ले घटि हो । अर्थात यसको मुल्यमा अधिक उतार चढाव हुन्छ ।यो अधिक मुल्यवान भएकाले यसलाई एक लाख भाग सम्म बिभाजन गरेर खरिद बिक्री गरिन्छ ।
यो अमुर्त मुद्रा हो । यसैले यसलाई घर वा गोजिमा राख्न सकिदैन । यसको लागि अनलाईन वालेट एकाउण्टको आवश्यक्ता हुन्छ । ईन्टरनेटको माध्यमबाट यसको एकाउण्ट बनाउन सकिन्छ । बिटक्वाईन खरिद गर्न एउटा डिजिटल एड्रेस/एकाउण्टको आवश्यक्ता पर्दछ । यसमा बिटक्वाईन राख्न सकिन्छ । यसलाई खरिद तथा बिक्रि गर्न सोहि एकाउण्टबाट गर्न सकिन्छ ।
बिटक्वाईन माईनिंग वा माईनरस
बिटक्वाईन एक अमुर्त मुद्रा हो । बिटक्वाईन बनाउने तरिकालाई माईनिङ्ग भनिन्छ । बिटक्वाईन माईनिङ्गको काम गराउनेलाई माईनरस भनिन्छ । जो सँग बिशेष किसिमको तिब्र प्रोसेसिङ्ग क्षमता भएको शक्तिशाली कम्प्युटरको माध्यमबाट मात्र यो संभव छ । यसको लागि बिशेष क्षमतायुक्त मानबस्रोतको समेत जरुरी हुन्छ । अन्यथा समय लगाएत बिद्युत र अन्य क्षती बाहेक केही हुन्न । बिटक्वाईन बनाउने पनि निश्चित क्षमता हुन्छ । भनिन्छ यो संसारमा २ करोड १० लाख मात्र बिटक्वाईन बनाउन सकिन्छ । त्यसमध्ये १ करोड ३० लाख भन्दा बढि बिटक्वाईन बनिसकेका छन् । दैनिक रुपमा हजारौ बिटक्वाईन थपिने क्रम जारी छ ।
बिटक्वाईन किन लोकप्रिय भयो ?
यसको खरिद बिक्रीमा अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन
यो सुरक्षित महसुस भएको छ
यो लिएर हिड्न कुनै पनि खतरा छैन ।
किन्ने/बेच्ने मानिसको पहिचान नभइकन नै खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ ।
को सँग कति क्वाईन छ त्यो कुरा ब्यक्ति स्वयंबाहेक अरुलाई थाहा हुँदैन अर्थात धनीको पहिचान गोप्य हुन्छ ।
चौबिसै घण्टा/ सातै दिन/ ३६५ दिन जतिखेर पनि यो किनबेच गर्न सकिन्छ ।
मुल्यमा अति उतारचढाव भएकाले छोटो समयमा नै उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
संसार भरका मानिसहरुलाई बेच्न र संसार भरबाट खरिद गर्न सकिन्छ ।
बिटक्वाईनको खरिद बिक्रीमा सरकारको निगरानी हुँदैन ।
बिटक्वाईन बाट हुन सक्ने नोक्सानी
यसलाई रेगुलेट गर्ने निकाय छैन त्यसले गर्दा अधिक उतार चढाव हुनाले सोझा मानिस फस्ने सम्भावना बढि हुन्छ ।
यदि बिटक्वाईन एकाउण्ट ह्याक भयो भने त्यसको कानूनी उपचार छैन । ठूलो लगानी कर्ताको लगानी सँधै जोखिम रहन्छ ।
यसमा आएका पैसा सबै सहि तरिकाले आएका हुन्छ भन्ने छैन ।
कालो धन/२ नं. पैसा यसमा लगानी हुने कुरालाई नियमन गर्ने आधार छैन ।
नेपाल जस्तो देशमा हावाको आधारमा लगानी गर्ने मानिसहरुको पैसा डुब्ने खतरा रहन्छ ।
देशको पुँजी पलायन गर्ने एक दरिलो माध्यम बन्न सक्छ ।
सम्पत्ती शुद्धिकरणको कुरालाई यसले प्रश्रय दिन सक्छ ।